Fanendahana ao Mahajanga Tratra ireo nahafaty mpialasasatra
Misy faritra mena fanendahan’ireo jiolahy mpanindrona antsy any Mahajanga, tahaka ny any Tsararano.
Ireo mpialasasatra no tena hazain’ireo olon-dratsy ary vitan’izy ireo ny mandatsaka aina. Ny alahady 22 septambra tokony tamin’ny 9 ora sy sasany alina dia nisy mpanendaka telo lahy nisakana olona telolahy hamonjy fodiana nandalo teo amin’ny Pont blanc Tsararano, Nosikely Mahajanga ka lasan'ireto jiolahy ny finday ary mbola notsindromin’ireto mpanendaka ny antsy ity tompona finday. Naratra mafy ity farany ka nentina tany amin’ny hopitaly saingy tsy tratra intsony ny ainy.
Ny alatsinainy lasa teo tokony ho tamin’ny 6 ora hariva anefa dia nahatratra mpanendaka iray teny akaikin’ny Pont blanc indray ny polisy ka rehefa natao ny famotorana an’ity mpanendaka ity dia fantatra fa izy no tompon’antoka tamin’ny tsindron’antsy sy vono olona niseho teny amin’ny Pont blanc ary fantatra ihany koa fa mbola voarohirohy amin’ny resaka vaky trano ihany koa ity lehilahy ity. Manamaloka ny filaminan’i Mahajanga izay fanaovana vakansy ny tranga toy izao. Araka ny voalazan’ny mponina any an-toerana, fadiana ny mandeha irery amin’ny toerana mangina na atoandro be nanahary aza, indrindra ho an’ireo mpiavy na mpandalo amin’izao fialantsasatra izao.